Dowlada Soomaaliya” Waa muhiim in magaalada Kismaayo maamul loo magacaabo” – SBC
Dowlada Soomaaliya” Waa muhiim in magaalada Kismaayo maamul loo magacaabo”
Posted by Webmaster on October 3, 2012 Comments
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa ku howlan sidii maamul buuxa loogu sameyn lahaa Magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolka Jubada hoose .
Wasiirka Arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka DFS C/salaam Macalin ayaa sheegay in ay soconayaan qorshaha maamul u sameynta magaalada kismaayo islamarkaana loogaga fadhiyo sida ugu dhaqsiyaha badan Dowlada Soomaaliya.
Waxa uu sheegay wasiirku in ay muhiim tahay markii dhul ka maqnaa dowlada uu gacanta galo loo sameeyo maamul matala dowlada taasina ay tahay howl dowlada u taala loona baahan yahay in looga dambeeyo.
Wasiir C/salaam ayaa sidoo kale sheegay in dowlada iyo isagaba aysan ka warqabin shir ka socda dalkaasi Kenya kaas oo sida la sheegay lagu abaabulayo maamul ka shaqeeya magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolka, waxaana shirkaasi abaabulkeeda iskaleh ururka wadamada Igad iyo siyaasiyin soomaali ah.
“Runtii anigu kama warqabo shirkaasi iyo ajandayaashiisa, qaabka uu u socdo iyo ujeedadiisana ma ogo, laakin muhiimada waxa ay tahay in Igad iyo Amisom ay garabsiinayaan dowlada Soomaaliya. Ayaa ka mid ahaa hadalada ku simaha wasiirka arimaha gudaha ee Soomaaliya.
Sikastaba ha ahaatee ma qeexin wasiirka xiliga ugu dambeeya ee lagu dhawaaqayo maamul loo sameeyo Magaalada Kismaayo, waxaana uu sheegay in iminkadan madaxweynaha dalka uu ku mashquulsanyahay howlaha ku aadan sidii uu u soo magacabi lahaa raiisul wasaare cusub.